ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးလူတွေက လူတွေကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ဖို့ အကြိုးစားဆုံးသူများဖြစ်ကြောင်း Robin Williams ၏ သင်ခန်းစာ (၁၅) ချက် - ONE DAILY MEDIA
ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးလူတွေက လူတွေကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ဖို့ အကြိုးစားဆုံးသူများဖြစ်ကြောင်း Robin Williams ၏ သင်ခန်းစာ (၁၅) ချက်
2014 ခုနှစ်တွင် ရော်ဘင် ဝီလျံ ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ဤ စိတ်ဒဏ်ရာဟာ ဘယ်သောအခါမှ ပျောက်ကင်းမည်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်တော့မှ မဆုံးရှုံးနိုင်သောအရာမှာ သူ၏စွမ်းရည်၊ သူ၏ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနှင့် ဟာသဥာဏ်နှင့် ရုပ်ရှင်များတွင် သူသရုပ်ဖော်ထားသည့် မမေ့နိုင်သော ဇာတ်ကောင်များစွာတို့ဖြစ်ပါတယ်။
Robin Williams နှင့် သူ၏ပါရမီကို လေးစားစွာဖြင့် သူပေးခဲ့သော ဘဝသင်ခန်းစာများနှင့် သူ၏ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင် များကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုပါတယ်။
(၁) လူရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ပါစေ
“ဘဝမှာ အဆိုးဆုံးအရာက တစ်ယောက်တည်းအဆုံးသတ်လိုက်ဖို့ပဲလို့ တွေးဖူးပါတယ် အဲဒါ …. မဟုတ်ပါဘူး။ ဘဝမှာ အဆိုးဆုံးက မင်းကို တစ်ယောက်တည်းခံစားရစေမယ့် လူတွေဆီမှာ အဆုံးသတ်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်”
“ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးလူတွေက အခြားလူတွေကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့က တခြားဘယ်သူကိုမှ သူတို့လိုမခံစားစေချင်တာကြောင့်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်”
(၃) အခန့်မသင့်မှုများကနေ ဘဝသင်ခန်းစာကောင်းများရရနိုင်ပါတယ်\_
“သင့်တွင် ဆိုးရွားသောအချိန်များ ပါရှိလိမ့်မယ်။သို့သော် ၎င်းတို့ကို သင်က ဂရုမစိုက်ခြင်းဖြင့် နိုးထနိုင်ရပါမယ်”
— Good will hunting ဇာတ်ကားမှ Sean Maguire အဖြစ် Robin Williams
“သင့်အကြောင်း မကောင်းကြောင်းပြောသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရသောအခါ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်နှလုံးသားကို ဓားနဲ့ထိုးသလိုပါပဲ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်က‌တော့ကျွန်ုပ်၏အလုပ်အပေါ် အပြင်းထန်ဆုံး ဝေဖန်သူဖြစ်အောင် နေပါတယ်”
ကျေးဇူးပြုပြီး သိပ်စိတ်မပူပါနဲ့။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့မည်သူမျှ ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အလွန်ကြာကြာမနေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝသည် တိုတောင်းလှပါတယ်။။ သင် စိတ်ဆင်းရဲနေပါက ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ပြီး ကြယ်ပွင့်များနှင့်အတူ ကတ္တီပါညတစ်ညကို ဖြတ်ကျော်လိုက်ပါ။
(၆) အသက်၅၀ မှာ ဘဝစပါပြီ
အသက် 30 ဝန်းကျင်တွင် ကျွန်ုပ်၏ဘဝအလယ်အလတ်အကျပ်အတည်းကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် 50 ကို ရောက်တဲ့အခါ ဒါက အေးဆေးပါပဲ ဘဝ၏ အနှစ်သာရအဖြစ် ခံစားရမည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစစအရာရာကောင်းမွန်နေပြီး၊ ရုန်းကန်စရာမရှိတော့သည့် နေရာသို့ သင်ရောက်ရှိသွားပါပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) အမှန်တစ်ခုဟာ အမှားအခုတစ်ရာရဲ့ ရလဒ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အမှားလုပ်မိလျှင် မည်သည်ကမှန်သည်ကိုလည်း သိရပါမယ်။
” တစ်ခါတရံမှာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေထက်၊ သိပ်ပြီး အဆင်မပြေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေ ရှိခဲ့တယ် ။ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့လူတွေကို တွေ့ခဲ့ရလို့ နောင်တ မရပါဘူး။ အရာရာတိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခု အမြဲရှိပါတယ် ”
(၉) အရာရာမှာ မပြည့်စုံပေမယ့် တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စည်းပါ
” မင်းက မပြီးပြည့်စုံဘူး၊ ဒါပေမယ့် မင်းကို ငါကယ်တင်ပေးမယ်။ မင်းတွေ့ရတဲ့ ကောင်မလေးက အရာရာမပြည့်စုံပေမယ့် ငါတို့ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတွက် ပြီးပြည့်စုံနေပါလိမ့်မယ် ”
(၁၀) အနားယူအားဖြည့်ရန် မကြောက်ပါနဲ့
မင်းမှာ အလုပ်ဆက်လုပ်ရင် ပိုကောင်းမယ် မဟုတ်ရင် လူတွေ မေ့သွားလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ် ။ ငါကတော့ ငါ အနားယူလိုက်ရင် လူတွေက ငါ့ကို ပိုစိတ်ဝင်စားလာနိုင်တယ် လို့ယူဆတယ်။
(၁၁) စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို ‌ပျိုးထောင်ပါ
“စိတ်ကူးဉာဏ်ဟာ သူ့ဘာသာသူ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းသောကလေးအဖြစ် ကြီးပြင်းလာသော သူဟာ စိတ်ကူးဉာဏ်သည် ရှင်သန်မှုယန္တရား လိုအပ်ပါတယ်”
(၁၂) အရေးကြီးသောအရာကို ဦးစားပေးပါ
ဤ‌ လောက ကြီးတွင် မိမိတန်ဖိုးမည်မျှရှိသည်ကို မသိသော်လည်း မိမိဟာ လူအနည်းငယ်ကို ပျော်ရွှင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားကြောင်း သိထားသရွေ့ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်
သင်ယူစရာများစွာရှိပါသေးတယ် အမှားတွေကိုတောင် အံ့သြစရာအဖြစ် သင်ယူရပါမယ်။”
(၁၄) စကားများများပြောပါ စာလျှော့ရေးပါ
စာသားများက စကားဝိုင်းကို သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ လူတွေက သူတို့ရဲ့ ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် မင်းကို တခါတရံ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ မှတ်တမ်းတင်တာက ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ သူတို့ သင်နှင့် စကားပြောရုံမျှဖြင့် မကြာမှီ ၎င်းတို့၏ဖုန်းတွင် အချက်ပြမီးနီကို သင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(၁၅) မင်းဖြစ်ချင်သလဲ ဆိုတာကို တန်ဖိုးထားပါ။
“သင်ရူးသွပ်မှု အနည်းငယ်မျှရှိ ရုံနဲ့ သင်မရှုံးစေရပါဘူး။”
Robin Williams မှ ဘဝသင်ခန်းစာများထဲမှ မည်သည့်အရာက သင်နှင့်ကိုက်ညီပါသလဲ ? သူ့ကဏ္ဍတွေထဲက ဘယ်ဟာကို သင်အကြိုက်ဆုံးလဲ ဘာကြောင့်လဲ ??
နှစ် 30 ကျော် လက်တွဲပြီး အချစ်စစ်ကို ယုံကြည်စေခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး စုံတွဲ 15 တွဲ
ကားတစ်စီးကို ကြာရှည်အသုံးပြု‌နိုင်ရေးအတွက် ဂရုပြုရမည့် စည်းကမ်း (၉) ချက်